Barnaamijka caanka ah – Bogga 13 – Windows – Vessoft
Barnaamijka caanka ah – Bogga 13
Output Messenger 1.8.6 Server iyo Client
Tani waa maamulaha taxane ah oo leh hawlo waxtar leh oo lagu maareynayo faylasha, iyo sidoo kale liiska iyo daabacaadda faylalka ama content directory.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in uu wax ka beddelo qiyamka-cayaarta sida tirada noolaha, qaddarka rasmiga, lacagta ama dhibcaha. Barnaamijka si sax ah ayuu u shaqeeyaa kaliya hal cayaaraha cayaarta.
Tani waa maamulaha faylka si loo xakameeyo waxyaabaha ku jira qalabkaaga Android isla markaana isla markiiba u wareejin faylasha u dhaxeeya qalab iyo kombuyuutar.
software The maareysaa maqaal qoruhu disk adag, ay kala qeybinta ama laga guurayo, dhaqaaqin, hubinta, diinta iyo dib u soo celinta.
Qalab Sahlan ee la shaqeeya qaabab file maqal ah oo caan ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad edit iyo saaro raad audio ka faylasha video.
Tool in ay ka shaqeeyaan sanamyadooda iyo sawiro. Software ka kooban filtarrada badan oo kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta kala duwan ama abuuro mashaariic si toos ah.